Haninge waxeey u jirta magaalada Stockholm 20 daqiiqo waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu waweeyn gobolka. Degmada Haninge waxaad ka heli guryo waanagsan, center weyn oo sii weeynaneysa dukaamo badan iyo kaafeteriyaal, waxaana ka heleysa jasirado yaryar iyo dabeecado waanagsan. Haninge qof kasta wuxu jecelyahay wuu ka heli!
Haninge bostäder waa shirkad ey degmada iska leedahay waxana saf u istagi karta sidaa guri lagu siiyo. Shirkadooyin kale u qof sii gaar u leeyahay wii jiraan oo degmada guryo ka kiireya. Degmada Haninge guryaheeda waxeey u dhigmaan boqolkiiba 43 guryo yaryar, boqolkiiba 25 gurya laa ijaaro oo ku yaal dhismo ka kooban guryo badan hyresrätt boqolkiiba 32 guryaha la badh iibsado oo ayagan ku yaala dhismaha guryaha badan ka kooban. Degmada bogeeda internetka ayaad ka heleysa wixi fahfaahin ah guryaha ku yaala Haninge.
Degmada Haninge waxaa ku yaala jaaliyado badan oo isugu jira kuwa ciyaaraha, dhaqanka iyo kuwa siyaasada. Qof kasta wuxuu xiiso u haayo wuu heleyaa. Jaaliiyadaha firifircoon oo dhan ee ka jira degmada waxaad ka heli kartaa liiska diiwaangalinta jaaliyadaha ee degmada. Degmada Haninge waxaa ku yaala goobo badan oo lagu ciyaaro xilli firaaqaha waxaana ku yaala meelo badan oo lagu dabaasho iyo dabeecad wanaagsan. Waxaa kaloo ka heleysaa degmada kaanisado iyo ururyo diimeed badan.
Degmada waxa ku yaala dukaamo badan oo gada dhar, maacuun iyo alaabta guriga. Waxaana ka mid ah degmada dukaankeeda gacan labaadka ee secondhand-butik Fyndet lacagta soo gasha waxaa wax loogu qabtaa dadka shaqo la aanta heeyso ee degmada dagan.
Degmada waxaa ku yaal in la'eg labaatan dugsiyo hoose-dhexe iyo toban dugsiyo hose-dhexe oo sii gaar loo leeyahey. Haninge wuxaa ku yaala dugsiga sare ee Fredrika Bremer gymnasiet waxaana xukuma degmada. Waxaa kaloo ku yaal degmada lix iskool oo kala heeysta barnamijyo kala duwan. Waxaa kaloo ka heleysaa dugsi sare oo gaar u ah kheyraadka dabiiciga ah.
Degmada Haninge waxaad ka heleysaa rugag caafimaaded oo fara badan, rugta caafimaadka caruurta iyo rugta dhalinyarada. Waaxaa kaloo ka heleysaa dakhtaro ilkhaha qaabilsan iyo rugta xannaanda hooyoyinka iyo Cisbitaalka Handen. Magalaada Stockholm maamul goboleedkeeda caafimaadka ayaa u xil saaran in dadka gobolka degan eey helaan daryeelka caafimaad eey u baahanyihiin.
Degmada Haninge waxaa laga qaataa tareen ama bass. Meelaha jaziiradaha yaryarna waxaa ku badan doomaha. Isteeshinada uu istaago tareenka waa Handen, Jordbro, Västerhaninge, Krigslida, Tungelsta iyo Hemfosa marka laga billaabo dhinaca waqooyi. Xaafadaha kale waxaad ku tagi kartaa basaska jazirahana waxaad ku tagi kartaa doomaha.
Shirkadda SL boggooda internetka waxaad ka iibsan kartaa safaradaada waxaad kaloo ka heli kartaa qiimaha tikidada iyo waxyaabo kaloo badan.
1 personlig assistent 100% Personlig assistent
Vikariat till kassa / serviceavdelningen Kundtjänstmedarbetare
Helgextra till vår TV / Hifiavdelning i Länna Butikssäljare, fackhandel
Bogga 1 ee ka mid ah 719